Riley Touchscreen Smartwatch ny fijerin'i Marc Jacobs miaraka amin'ny Wear OS | Androidsis
Ilay mpamorona lamaody fanta-daza Marc Jacobs dia manolotra ny smartwatch vaovao, ny faharoa amin'ny tantarany ary ny voalohany amin'ny efijery mikasika. Ankoatr'izay, ity modely ity no voalohany mampiasa Wear OS amin'ny maha rafitra miasa azy. Miresaka momba izany isika Riley Touchscreen Smartwatch. Famantaranandro izay maneho fanentanana vaovao ho an'ny kinova vaovao an'ny rafitra fiasa eo amin'ny tsena.
Ity maodely ity dia maneho ny fidiran'ny mpamorona ao amin'ity tsena ity. Satria ny Riley Touchscreen Smartwatch dia manolo-tena amin'ny efijery mikasika sy manome antsika ireo lahasa lehibe indrindra antenain'ny mpampiasa amin'ny smartwatch. Izy rehetra dia manana Wear OS ho toy ny rafitra miasa.
Mikasika ny famolavolana, ny marika dia manome antsika maodely faran'izay kely farafaharatsiny. Izy io dia manana efijery boribory sy satro-boninahitra boribory boribory. Volavola tsotra izy io, saingy iray izay mahatonga azy io ahazoana aina be amin'ny fampiasana isan'andro. Ary tsy isalasalana fa io no iray amin'ireo lakilen'ity famantaranandro ity.
Ny tranga an'ity Riley Touchscreen Smartwatch ity dia 42 mm ary manana efijery 1,19-inch. Izy io dia tontonana OLED ary amin'ny maha processeur azy dia miloka amin'ny Snapdragon 2100 izy, izay fahita indrindra amin'ny tsenan'ny smartwatch. Tsy nisy voalaza momba ny RAM sy ny fitehirizana anatiny. Na dia misy aza ny fomba isan-karazany dia aseho fa 512 MB / 4 GB.
Satria io vola io no fenitra hitantsika matetika amin'ny famantaranandro miaraka amin'ny Wear OS. Ka ity Riley Touchscreen Smartwatch ity dia tsy antenaina hisy hafa amin'izany. Ao amin'ny horonan-tsary dia azonao jerena izay azon'ny mpampiasa atao amin'ity famantaranandro ity. Mahazoa antso, fampandrenesana, henoy ny mozika ... Fehiny, ireo hetsika mahazatra indrindra amin'ny famantaranandro marani-tsaina.
Ny Riley Touchscreen Smartwatch dia efa amidy amin'ny tranokalan'ny mpamolavola. Izy io dia misy loko telo samihafa (volondavenona, fotsy mainty ary mainty) ary ny dikanteny rehetra dia omena amin'ny $ 295 amin'ny fomba ofisialy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Riley Touchscreen Smartwatch: Ilay fiambenana vaovao miaraka amin'ny Wear OS
LG Q Stylus, Stylus Alpha ary Stylus Plus: Ny eo afovoany dia miloka amin'ny pensilihazo